बाँदरको हातमा आइप्याड :: Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Audio, Video, Nepali Model, Actor, Actores, Interview
बाँदरको हातमा आइप्याड बाँदरको हातमा नरिवल भन्ने उखान त सुनैकै हो । सायद यो उखान अब पूरानो भैसक्यो जस्तो छ । धनी देशहरुका हकमा भने बाँदरको हातमा नरिवल होइन कम्प्युटर तथा मोबाइल जस्ता अत्याधुनिक साधन पर्न थालिसकेका छन् ।
यसको प्रमाण हो अमेरिका । अमेरिकाको नेसनल चिडियाखानाको बाँदरलाई आइप्याड दिइएको छ । चिडियाघरका ओरांगओटनहरु अहिले आइप्याड खेलाउन र त्यसमा भएका विभिन्न गेम खेल्नमा मस्त छन् ।
चिडियाखानाका कर्मचारी बिकी म्यालिन्स्कीका अनुसार यी जनावरको दैनिकीमा केही परिवर्तन होस्, नयाँ कुरा सिकुन् र अल्छि नबनुन् भन्नका लागि उनीहरुलाई आइप्याड बाडिएको हो । यसअघि ती ओरांगओटनलाई विभिन्न खालका खेलौनाका साथै खेल खेलाइने गरिएको थियो ।
आइप्याड दिएसँगै ओरांगओटनहरुले विभिन्न दश खालका गेम एप्सहरु सिकिसकेका छन् । म्युजिक बजाउने, चित्र खिच्ने जस्ता खेल खेल्नमा उनीहरु माहिर भैसकेका छन् । ३६ वर्षका बोनी आइप्याडमा डम बजाएर मिठो संगित निकाल्न खप्पिस बनिसको छ । १६ वर्षको क्याली पियानो बजाउँछ ।
एप्स फर एप भन्ने अभियान अन्तरगत एक संरक्षणवादी संस्थाले यी ओरांगओटन बाँदरलाई आइप्याड उपलब्ध गराएको छ । ओरांगओटनलाई जैविक रुपमा मानिसको सबैभन्दा नजिकको बाँदर प्रजाति मानिन्छ ।
4 Comments on “बाँदरको हातमा आइप्याड”
bandipure wrote on 27 January, 2013, 12:40
नेपाल माँ मंत्री भएर झान्दावाल गाडीमा हिड़ने २ खुट्टे भन्दा यी बदरहरु १ स्टेप अगाड़ी पुगेछन /
Well-loved. Like or Dislike: 53 0[जवाफ फर्काउनुहोस्]pokhereli Reply: January 31st, 2013 at 2:08 amwell said..
samir dc wrote on 27 January, 2013, 17:22
uttam nepali leaders ka guru rahechhan.
Bishwa nath bohara wrote on 29 January, 2013, 5:32
Ramro kura sundha khusilayo tara nepali samajama badharko jatikai bibeka sila kahile hune hola.